I-Monitoring System and Protection System, China The Monitoring System and Protection System Abakhiqizi, Suppliers, Factory - HNAC Technology Co., Ltd
Uhlelo Lokuqapha kanye nohlelo Lokuvikela
Ikhaya>Umhlinzeki Wemikhiqizo>Qedela Amasethi Emishini Kagesi Nekagesi>Uhlelo Lokuqapha kanye nohlelo Lokuvikela
Isiteshi sikagesi esiphehlwa ngamanzi siyisiteshi sikagesi esiguqula amandla anamandla kanye ne-kinetic amanzi abe amandla kagesi. Uhlelo lokuqapha nokuvikela isiteshi sikagesi ophehlwa ngamanzi luwuhlelo lwemishini oluqapha ngokuningilizayo, olulawula futhi luvikele le nqubo yokuguqula amandla.
Umsebenzi oyinhloko wohlelo lokuqapha nokuvikela iziteshi eziphehla ugesi ukuqapha kanye nokulawula ukudluliswa kwamanzi kanye nohlelo lokuphehla ugesi, imishini nezinhlelo zemishini kagesi, amasango ezikhukhula kanye nezakhiwo ezisebenza ngamanzi, njll., ukuze kuqinisekiswe ukuthi ukusebenza okuphephile, okuphumelelayo kanye nomnotho kweziteshi eziphehla ugesi ngamanzi.
1. Uhlelo lokuqapha lwesiteshi esiphehla ugesi ngamanzi ikakhulukazi luhlanganisa uhlelo lokukala, uhlelo lwezimpawu, uhlelo lokusebenza kanye nohlelo lokulungisa lwesiteshi sikagesi. Njengamanje, izinhlelo zamakhompiyutha zivame ukusetshenziswa ukuze kuqashwe iziteshi eziphehla ugesi ngamanzi.
2. Uhlelo lokuvikela lwesiteshi esiphehla ugesi ngamanzi ikakhulukazi luhlanganisa ukuvikelwa kwesistimu yamanzi, ukuvikelwa kwemishini kanye nokuvikelwa kwempahla kagesi, njengokuvikela isiteshi esigcwele amanzi, ukuvikela isivinini esingaphezu kweyunithi, ukuvikela izinga lokushisa elingaphezu kwamandla, ukuvikela umfutho ophansi kawoyela ezingozini zemishini yokucindezela uwoyela, nokuvikelwa kokudluliselwa kwedatha izinto zikagesi.